Uru anyị - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Jera gbara mbọ inye ndị ọrụ anyị asọmpi na mmemme enyemaka zuru oke. Uru anyị gụnyere nkọwa ndị a:
Ihe na-adọrọ mmasị ịkwụ ụgwọ
Jera na-enye ndị ọrụ ihe ngwugwu na-adọrọ adọrọ na ebe ọrụ na-agba ume na mmepe.
Na mgbakwunye na ụgwọ ọrụ ịsọ mpi, anyị na-enye ndị ọrụ anyị ọtụtụ uru dị iche iche gụnyere ụgwọ ọrụ ahịa ndị otu, Ọdịmma ndị ọrụ njem, enyemaka ego ọdịnala ọdịnala na wdg. iru eru ma mee ka nkà ha dịkwuo mma iji mee ezigbo ọdịnihu.
Jera na-elebara onye ọrụ ọ bụla na ahụike ya na ahụike ya anya.
Anyị na-enye mkpuchi nchekwa ndụ na nyocha ahụike mgbe niile. Anyị na-enwe mkparịta ụka na-arụ ọrụ oge niile na ọrụ ụlọ iji nyere ndị anyị aka ka ha nwee nnukwu obi ma wulite nghọta na mmekọrịta dị n'etiti anyị.
Oge akwụ ụgwọ （PTO）
Jera na-enye onyinye afọ ofufo maka oge ezumike kwa afọ na ezumike ọdịnala mba. Anyị ghọtara uru ọ bara inwe oge ọrụ, ọ na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ume ma nwee steeti ka mma maka ndụ na ọrụ.
Na mgbakwunye, anyị na-akwụ ụgwọ oge ijikọ ụmụaka na ọrịa na-arụ ọrụ, nke na-enyere ndị ọrụ anyị aka ịnwe ego ịkwụ ụgwọ mgbe ha na-anọghị ọrụ.
Ọzụzụ na Developzụlite
Jera kwenyere na mmeta ụlọ ọrụ na akụnụba dabere na ndị ya, anyị na-etinye ego na ndị ọrụ ya n'oge ọrụ ha na ụlọ ọrụ iji nyere ha aka ịzụlite ikike na nka ha.
Anyị na-enye ọzụzụ na mmepe iji bulie ikike nke ndị anyị ma kwadebe ha nka, gụnyere mmepe ndu, njikwa ọrụ, ire ahịa na mkparịta ụka, njikwa nkwekọrịta, ọzụzụ na njikwa mmekọrịta ndị ahịa. ọrụ ha ugbu a kamakwa ịkwadebe ha ịkwado n'ọnọdụ siri ike n'ọdịnihu.